~ ဏီလင်းညို ~: ရှေ့တိုး/ နောက်ဆုတ် သင်္ကြန်
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 3:52 AM
ကိုဏီ ပြီးတဲ.အထိ ဆွဲခေါ်သွားတာ ကောင်းလိုက်တာ
သင်္ကြန်မှမဟုတ်ပါဘူး နေရာတိုင်းမှာ အသစ်ကိုမြင်ပြီး အသစ်ကိုသုံးမှ ခောတ်နဲ.ညီမယ်လို.ထင်နေကြတဲ.သူတွေရဲ. ဖြစ်ရပ်လေးတွေပါ
နောက်ဆုံးမှာတော. နေရာဟောင်းလေးက အကောင်းဆုံးပါဘဲ :)
ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မဟောင်းတဲ့ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ ... ကိုဏီ ....
ကိုဏီဘလော့ထဲ အလည်လာသွားပါတယ် ..
မောင်ဏီ့ဆီကနေ စာအရေးအသားလေးတွေ အတုယူချင်ပေမယ့် ပါရမီက အဲ့ဒီလောက်မပါဘူးကွယ်။
အားကျလို့ သင်္ကြန်ပို့စ်တစ်ပုဒ်တော့ တင်လိုက်ပြီ။
ဆွေလေးမွန်လဲတူတူပဲ..တစ်ကယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆော့ရတဲ့ သင်္ကြန်ကိုပဲ မြတ်နိုးတယ်..
သူငယ်ချင်းတွေကခရီးထွက် ဆွေလေးမွန် ကငေါင်တောင်တောင်ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်..
ကိုဏီပို့စ်ဖတ်ပြီး သင်္ကြန်ပို့စ်တစ်ပုဒ်တောင် ရေးချင်လာမိတယ်။ နားထဲမှာ တူးပို့သံတွေတောင် ညံလာရဲ့။
ဒါလေးက ကိုယ်တွေ့ကို အခြေခံရေးထားတာနဲ့ တူတယ်၊ ကိုဏီလင်း မနှစ်ကလားတော့ သေချာမမှတ် မိတော့ဘူး၊ သင်္ကြန်မှာ ကားနဲ့လည်ရင်း အပြန် ပိုက်ဆံအိတ် နှိုက်ခံထိတယ်လို့ ရေးဖူးတာလေးကို အခု ဒီပို့စ်ဖတ်ရင်း တွေ့လိုက်ရလို့၊ ဟုတ်တယ်၊ ထရီဆာလဲအရင်က ကားနဲ့လည်တယ်၊ နောက်တော့လဲ လမ်းထိပ်က အုန်းလက်မဏ္ဍပ်မှာပဲ ကလေးတွေရေကစားတာကို ထိုင် ထိုင်ကြည့်ဖြစ်တော့တယ်၊
(ဒီနှစ် စွယ်တော်ဘက်ရောက်ရင် လာခဲ့လေ...ရေပက်ရမယ်...:P)
ထရီဆာ >>> ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ပေမယ့် ကြုံဖူး ကြားဖူးတဲ့ အဖြစ်လေးတွေကို စုစည်းရေးလိုက်တာပါ။ ရေးရင်းနဲ့ မနှစ်တုန်းက ကိုဏီတို့ကားလည်ရင်း ပြည်လမ်းပေါ်က လေးဖြူမဏ္ဍပ်ရှေ့မှာ ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်သွားတဲ့ ညီလေးနှစ်ယောက်အကြောင်း သတိရလာလို့ ထည့်ရေးလိုက်တာပါဗျာ..... :)
သင်္ကြန်ရဲ့ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် အငွေ့အသက်တွေနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုတွေကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို လာဖတ်သွားပါတယ် ကိုဏီ။
ဆယ်စုနှစ်မက ကျန်ခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ကာလ တွေ ဆီ တောင် စိတ်ရောက်သွားတော့တယ်။
လာရောက်ဖတ်ရှု အားပေးသွားပါတယ် ကိုဏီလင်းညို